Ma May Si Koe
Focus beauty က အသစ်မွေးထုပ်လိုက်တဲ့ BETTEE SOAP SCRUB & COFFEE SOAP SCRUB မိမိအသားရေကို ဂရုစိုက်ထိန်းသိမ်းလိုသော အမျိုးသား ၊ အမျိုးသမီး တိုင်းအသုံးပြု့သင့်သော အရည်အသွေးမြင့် နေ့စဉ်သုံး ဆပ်ပြာ ဖြစ်ပါတယ် အထူးသဖြင့် အသားအရေမညီမညာသူများ အမဲစက် တင်းတိတ် နှင့် ဝက်ခြံများ၊အသားမာများ၊အသားအရေအမဲကွက်များနှင့်ဂျွတ်များကြောင့်စိတ်ညစ်ညစ်ရသူများအတွက် မရှိမဖြစ် အသုံးဝင်တဲ့ ဆပ်ပြာလေးပါနော် Scrub Type သဘာဝချေးချွတ်ဆပ်ပြာဖြစ်သောကြောင့် ရေချိုးပြီးတိုင်း Body lotion ကဲ့သို့သော အသားအရေအဟာရဖြည့်ပေးတဲ့အတွက် သူံးစွဲပြီးပါက အလွန်ထူးကဲသောအသားအရေ တောက်ပမှုကို ၂ဆ ၃ဆ အထိ ရရှိခံစားရမှာပါနော် BETTER SKIN COFFEE SOAP SCRUB ဆပ်ပြာ 1 ခဲကို 4500ks အော်တာလက်ခံပါတယ် လက်ကား စျေးသီးသန့်ရှိပါတယ်နော်😍😍😍 📱09454549089 #YMP Focus Beauty
👻👻👻မျက်နှာပေါ်မှာ ဘာပြဿနာတွေရှိရှိ🤗🤗 🐌🐌🐌Snail Wish တစ်ဘူးသာဆောင်ထားလိုက်ပါ 🐌🐌🐌 💐💐💐Snail Wish လေးကသင့်အရေပြားပြဿနာ အားလုံးကိုဖြေရှင်းပေးပါလိမ့်မယ်👍👍👍 50g . 29500 ks ❤️ လက်လီ လက်ကား မှာယူရန် 09454549089 Crd Star Angel Angel
Focus Beauty တစ်နှစ်ပြည့် ရွှေ တစ်ကျပ်သား target အတွက်ပေးအပ်ဖို့ အခေါက်ရွှေ တစ်ကျပ်သားအတင် ရွှေပြားတွေ ရပြီနော်... အလှပဆုံးပြုလုပ်ပေးတဲ့ အောင်သမာဓိရွှေဆိုင် မဖြူဖြူအောင်ကို အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်.
Ma Wai Wai Phyo
သင့်ရဲ့ အသားအရည်ကြည်လင်မှုအတွက် အစွမ်းထက်တဲ့ essenceနဲ့ Snail wish cream😍
Ma Ei Phyu
မလှဘူးဆို snail မလိမ်းရသေးလို့ပါ
အခက်အခဲရှိတိုင်း စိတ်ညစ်နေမိပြီလား. . . အခက်အခဲတိုင်းက ကိုယ်ပိုပြီး သန်မာဖို့ဖြစ်လာတာပါ. လူတိုင်းမှာ မမြင်နိုင်တဲ့ စွမ်းအား‌တွေ ရှိနေပါတယ်. ကိုယ့်ရဲ့စွမ်းရည်ကို ‌ဘောင်ခတ်မထားပါနဲ့ ဒီနေ့ကစပြီး Focus Beauty Agent တို့တွေ လူအများထက်သာလွန်တဲ့ စွမ်းအား‌တွေထုတ်ပြီး အမြင့်ဆုံးကနေ ပျံသန်းကြမယ်နော်.
Ma Swe Swe Myint
Focus Beauty Agent ဖြစ်ချင်ရင် ဒီနေ့ ‌နောက်ဆုံးအခွင့်အရေးပါ‌နော်. ဧပြီလကစပြီး Agent လက်ခံခြင်းကို ရပ်နားထားမှာဖြစ်ပါတယ်. လက်ရှိ Agent အရေအတွက်နဲ့ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးကို အကောင်းမွန်ဆုံး‌သော ၀န်ဆောင်မှုတွေနဲ့ အရည်အသွေး ပြည့် Product ‌တွေကို ဆက်လက်ရောင်းချပေးသွားမှာပါ. Agentတို့အတွက်လည်း ပိုမိုကောင်းမွန်အဆင့်မြင့်တဲ့ ၀န်ဆောင်မှုတွေ ထပ်မံတိုးမြင့်သွားမှာလည်း ဖြစ်ပါတယ်. #FocusBeauty #WeAreTheBest
မလှဘူးဆိုတာ Snail Wish မလိမ်းရသေးလို့
Focus Beauty Agent ဖြစ်ချင်ရင် ဒီနေ့ ‌နောက်ဆုံးအခွင့်အရေးပါ‌နော်. ဧပြီလကစပြီး Agent လက်ခံခြင်းကို ရပ်နားထားမှာဖြစ်ပါတယ်. လက်ရှိ Agent အရေအတွက်နဲ့ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးကို အကောင်းမွန်ဆုံး‌သော ၀န်ဆောင်မှုတွေနဲ့ အရည်အသွေး ပြည့် Product ‌တွေကို ဆက်လက်ရောင်းချပေးသွားမှာပါ. Agentတို့အတွက်လည်း ပိုမိုကောင်းမွန်အဆင့်မြင့်တဲ့ ၀န်ဆောင်မှုတွေ ထပ်မံတိုးမြင့်သွားမှာလည်း ဖြစ်ပါတယ်.
တစ်လအတွင်း သင့်အသားအရေ သိသာစွာ ‌ကောင်းမွန်လာမယ်ဆိုရင် သင်ယုံမလား . . . အောက်ပါ အဆင့်လေး‌တွေကိုသာ လုပ်ဖြစ်အောင် လုပ်ကြည့်ပါ ၁. 💎New Skiin Supplement💎 ကို တစ်ရက်တစ်လုံး ပုံမှန်သောက်မယ်. ၂. 💎New Skiin Mask💎 ကို တစ်ပတ် ၂ ရက် ပုံမှန်ကပ်မယ်. ၃. 💎New Skiin Cream💎 ကို ‌နေ့တိုင်းပုံမှန်လိမ်းမယ်. တစ်လပဲ အချိန်ပေးပါ. သင့်အသားအရေ သိသာစွာ ‌ကောင်းမွန်လာဖို့ အာမခံပါတယ်. မယုံရင် Before After ပုံလေး ရိုက်ပြီးယှဥ်ကြည့်နော် . . . New Skiin 💎💎💎Supplement အလုံး ၃၀ ပါ တစ်ဘူး ၂၉၅၀၀ ကျပ် 💎💎💎Mask ၅ ချပ်ပါ တစ်ဘူး ၁၅၀၀၀ ကျပ် 💎💎💎Cream 5g ပါ တစ်ထုပ် ၃၅၀၀ ကျပ် Focus Beauty ရဲ့ တရား၀င် Agent Card ရထားသူများထံမှာ ၀ယ်ယူမှ စိတ်ချရမယ်နော်.
First Page « 78 79 80 » Last Page